The Untouchables (1987) | MM Movie Store
ခြီကာဂိုမွို့မှာ မွို့မကျြနှာဖုံးလို့တငျစားလောကျတဲ့ လူတဈယောကျရှိတယျ…သူကငှကွေေးခမျြးသာတဲ့အပွငျ အစိုးရအသိုငျးအဝနျးကအကွီးအကဲတှရှေနေ့တှေနေဲ့လညျး ရငျးနှီးကြှမျးဝငျတယျ..သူ့ရဲ့ အဓိက ခမျြးသာမှုက တရားမဝငျအရကျခကျြရောငျးတာပဲ…ဆိုငျတှဖွေနျ့တယျ..မယူတဲ့ဆိုငျကို တဈနညျးနညျးနဲ့ဒုက်ခပေးတယျ…ဆိုငျကိုဗုံးခှဲတယျ..
ရဲတှလေညျးသူ့ဆီက ငှကွေေးထောကျပံ့မှုတှရေနတေော့ သူလုပျနတေဲ့လုပျရပျတှကေို မကျြကှယျပွုထားတယျ..ဒီလိုနဲ့ ခြီကာဂိုမွို့ရဲ့စနဈတကပြကျြစီးမှုကို ပွုပွငျပေးဖို့ အထူးအေးဂငျြ့တဈယောကျလှတျလိုကျပါတယျ…အဲ့ဒီအေးဂငျြ့က လူမှနျတဈယောကျ..သူပွုပွငျနိုငျရမယျ…ခြီကာဂိုမွို့ကိုဖကျြဆီးနတေဲ့အဖှဲ့ကိုလညျးသူဖမျးနိုငျရမယျလို့ယုံကွညျတယျ…
ဒါပမေယျ့ သူထငျထားသလိုဖွဈမလာဘူး..တိကတြဲ့သတငျးရလို့ ဝငျဖမျးတာတောငျ ဘာသကျသမှေမရတဲ့အပွငျ သတငျးစာမကျြနှာဖုံးမှာ အရှကျခှဲခံလိုကျရတယျ… ကိုငျးပရိတျသတျကွီးရေ ဒီကားထဲကမငျးသားကွီး (၃)ဦးကိုတော့ ရငျးနှီးပွီးသာဖွဈမှာပါ….
Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro တို့ပါ…ကြှနျတျောသူတို့ကားတှလေညျးရှမှေ့ာအတျောမြားမြားတငျခဲ့ပါတယျ …အထူးသဖွငျ့ Robert De Niro ပေါ့…ဒီကားထဲမှာတော့ ဗီလိနျကွီးပေါ့ဗြာ…
ဂြိနျးစဘှနျးမငျးသားကွီးလို့လူသိမြားတဲ့ , Sean Connery ကတော့ ဒီကားနဲ့ အကောငျးဆုံးဇာတျပို့အျောစကာဆုရခဲ့ပါတယျ…ကိုငျး အထူးအေးဂငျြ့ကွီး အခကျအခဲတှဘေယျလိုကြျောလှားမလဲကွညျ့လိုကျပါဦး….
ချီကာဂိုမြို့မှာ မြို့မျက်နှာဖုံးလို့တင်စားလောက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်…သူကငွေကြေးချမ်းသာတဲ့အပြင် အစိုးရအသိုင်းအဝန်းကအကြီးအကဲတွေရှေ့နေတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တယ်..သူ့ရဲ့ အဓိက ချမ်းသာမှုက တရားမဝင်အရက်ချက်ရောင်းတာပဲ…ဆိုင်တွေဖြန့်တယ်..မယူတဲ့ဆိုင်ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးတယ်…ဆိုင်ကိုဗုံးခွဲတယ်..
ရဲတွေလည်းသူ့ဆီက ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရနေတော့ သူလုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်..ဒီလိုနဲ့ ချီကာဂိုမြို့ရဲ့စနစ်တကျပျက်စီးမှုကို ပြုပြင်ပေးဖို့ အထူးအေးဂျင့်တစ်ယောက်လွှတ်လိုက်ပါတယ်…အဲ့ဒီအေးဂျင့်က လူမှန်တစ်ယောက်..သူပြုပြင်နိုင်ရမယ်…ချီကာဂိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းသူဖမ်းနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်…
ဒါပေမယ့် သူထင်ထားသလိုဖြစ်မလာဘူး..တိကျတဲ့သတင်းရလို့ ဝင်ဖမ်းတာတောင် ဘာသက်သေမှမရတဲ့အပြင် သတင်းစာမျက်နှာဖုံးမှာ အရှက်ခွဲခံလိုက်ရတယ်… ကိုင်းပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီကားထဲကမင်းသားကြီး (၃)ဦးကိုတော့ ရင်းနှီးပြီးသာဖြစ်မှာပါ….
Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro တို့ပါ…ကျွန်တော်သူတို့ကားတွေလည်းရှေ့မှာအတေ်ာများများတင်ခဲ့ပါတယ် …အထူးသဖြင့် Robert De Niro ပေါ့…ဒီကားထဲမှာတော့ ဗီလိန်ကြီးပေါ့ဗျာ…
ဂျိန်းစဘွန်းမင်းသားကြီးလို့လူသိများတဲ့ , Sean Connery ကတော့ ဒီကားနဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့အော်စကာဆုရခဲ့ပါတယ်…ကိုင်း အထူးအေးဂျင့်ကြီး အခက်အခဲတွေဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲကြည့်လိုက်ပါဦး….